IINDIDI ZEESANGO EZITYIBILIKAYO (IINGCAMANGO ZOYILO) - UKULUNGISWA NGAPHAKATHI
Eyona ukulungiswa Ngaphakathi Iindidi zeeSango eziTyibilikayo (Iingcamango zoyilo)
Iindidi zeeSango eziTyibilikayo (Iingcamango zoyilo)
Apha ngezantsi sabelana ezona ntlobo zithandwayo zeminyango yokutyibilika yekhaya kubandakanya ukudlula, ikhodiyani, ipokotho, ipatio kunye neengcango zokugcina.
Nasiphi na isakhiwo, nokuba yindlu okanye isakhiwo, iingcango zibalulekile. Azikho nje ngenjongo yokuhombisa. Amasango asetyenziselwa abantu kunye nezixhobo. Kubalulekile ke ngoko ukuba uhlobo kunye nobungakanani bomnyango kufanelekile kulwakhiwo olo lulungiselelwe.
Ukusonga kunye neMinyango yeAccordion
Kule minyaka idlulileyo, iintlobo ezahlukeneyo zeminyango ziye zaphila. Olunye lweengcango ezisetyenziswa rhoqo kulo naluphi na ulwakhiwo ziingcango ezityibilikayo. Njengoko igama libonisa, ucango olutyibilikayo lushukunyiswa ngokushenxisa ipaneli kwelinye icala ngokuthe tye.
Uninzi lweengcango ezityibilikayo zibekwe ngokuhambelana nodonga. Banomkhondo ngaphezulu nasezantsi evumela ukuba iphaneli yomnyango isuswe kwelinye icala iye kwelinye. Iingcango zokutyibilika zingenziwa ngeglasi, ngomthi, okanye ngentsimbi.
Iingcango ezityibilikayo bezisetyenziswa ixesha elide. Ngapha koko, ubungqina bezinto zakudala bubonisa ukuba iingcango ezityibilikayo zazisetyenziswa kwizindlu zaseRoma ePompeii, e-Itali.
Eyona nto yokugcina impahla yomfazi
Iingcango zokuqala ezityibilikayo zaqanjwa ngu-Lew Hewitt no-Dee Horton ngo-1954. Baphefumlelwa ukuba bayile iingcango ezityibilikayo xa babenobunzima bejinga iingcango kwimimoya ephezulu eCorpus Cristi, eTexas.
kuchaphulo olu ukuba umtshakazi abe
Iingcango ezityibilikayo zithandwa kakhulu kwizindlu zokuhlala kuba kulula ukuzisebenzisa, zonga amandla, zigcina indawo, zifikeleleka ngokulula, kwaye zibonelela ngokhuseleko. Ezi iintlobo zeengcango zangaphakathi Zilungile kwiindawo ezincinci ezinjengeekhondomu okanye iikhitshi ezincinci kuba azinandawo zininzi. Xa usebenzisa iglasi yokutyibilika kweengcango, zivumela ukukhanya kwendalo ukuba kungene kwigumbi ngaloo ndlela kusebenze amandla.
Kwindawo enkulu evulekileyo, iingcango zeglasi ezityibilikayo zibonelela ngokwahlulahlula ngaphandle kokwenza ukuba isithuba sibonakale sincinci. Umzekelo uneofisi yasekhaya usebenzisa iglasi yokuhambisa iingcango. Banikezela ngasese kodwa abayinqumli indawo kuba usenokubona igumbi kwaye uvumela ukukhanya kwendalo kungene.
Iingcango zepokotho ziindidi zeminyango eshukumayo enepaneli enye ngaphandle kweehenjisi. Iphaneli yomnyango wepokotho iyanyamalala kwisango (okanye ipokotho) eludongeni. Iphaneli yomnyango ibekwe kwiiroller ezihamba ecaleni kwendlela engaphezulu.
Olu hlobo locango olutyibilikayo luyathandwa kwiindawo ezincinci nezingqingqwa apho kungekho gumbi laneleyo lokungena emnyango rhoqo. Imizekelo yeendawo ezinokufakwa kunye neengcango zeepokotho ngamagumbi okuhlambela amancinci okanye igumbi lokuhlambela / amagumbi eepowder, iikhabhathi, amagumbi okuhlamba iimpahla, kunye neeofisi zasekhaya. Funda ngakumbi malunga iintlobo zeengcango zeshawa Apha.
Kwizithuba ezikhulu, umnyango wepokotho unokusetyenziselwa ukwahlula amagumbi amabini. Umzekelo woku uphakathi kwegumbi lokuhlala kunye negumbi lokutyela. Endaweni yokusebenzisa iminyango eqhelekileyo, iingcango zepokotho zenza ukwahlula okufanelekileyo kodwa ayingxibi ipaseji kwaye ivumela ukuhamba okuqhubekayo kwendawo xa kuvulwa umnyango. Ikwagcina nendawo kuba umnyango awuthathi ndawo.
Nangona kunjalo, ukufaka iingcango zepokotho kufuna ukuba iingcali zijonge ezindongeni apho ziya kufakwa khona. Ipeyinti esetyenziselwa iingcango nayo kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuqinisekisa ukuba ayinamathele eludongeni kwaye iyinqande ekutyibilikeni kakuhle.
Umnyango wepatio yinto esihlala siwujonga ukuba ubonakala ngathi ucango olutyibilikayo. Inamacala amabini apho enye ihlala khona kwaye enye ityibilika yaya kwelinye icala.
Ikwabizwa ngokuba ngumnyango waseFrance. Iingcango zaseFrance zizibini zeengcango zepatio eziglasiweyo ezixhonywe kumacala ajongeneyo kwaye zidibana embindini. Benza indlela yokungena enkulu xa zombini iipaneli zivulwa. Nangona kunjalo, ayizizo zonke iingcango zaseFrance ezilungele iindawo zangaphandle.
kumnandi iingoma zomtshato wokugqibela zomdaniso
Iingcango zeepatio ezisilayidayo zixhomekeke kubume benziwe ngeglasi. Zihlala zibekwa ukwahlula indawo yangaphakathi ukuya ngaphandle. Ukusetyenziswa kwangaphakathi, banokusetyenziselwa ukwahlula igumbi lokuhlala kwigumbi lokutyela.
Iingcango zeBypass zineepaneli ezimbini ezikufutshane nezimileyo. Oku kuthetha ukuba baneengoma zombini ngasentla nangaphantsi komnyango.
Acoustic ikatala yomtshato iingoma zomtshato zihamba ezantsi
Olu hlobo locango olutyibilikayo luya kwicala elinye xa luvulwa. Lo mnyango utyibilikayo usetyenziswa kakhulu ufuna indawo ethelekiswa nezinye iintlobo. Iingcango ze-Bypass zihlala zisetyenziselwa ii-closets okanye ii-wardrobes.
Ngamanye amaxesha, kudlula iingcango zokwahlula igumbi lokulala negumbi lokuhlambela. Zihlala zenziwe ngomthi okanye ngeglasi. Ucango lokudlula kwiglasi lunika omnye umsebenzi: isipili esipheleleyo somzimba.
Oku kwenza ukuba ifaneleke ngakumbi njenge-wardrobe okanye umnyango wekhabethe . Ingasetyenziselwa indawo encinci yeofisi ecaleni kwegumbi lokulala ukudala ukwahlula kunye nokuba ngasese.
Iingcango zokugcina isilayidi ziyathandwa kwaye zinezibonelelo ezininzi ezenza ukuba zibe lukhetho olufanelekileyo lokusetyenziswa njengomnyango wangaphakathi.
Kwenye bayila indawo ekugxilwe kuyo kwaye banokunika igumbi lakho umtsalane kunye ne-rustic kwimbonakalo yanamhlanje kuxhomekeke kuhlobo lomnyango owufakayo.
Zijongeka zilungile nokuba zikwindawo evulekileyo okanye zivaliwe. Enye into malunga sliding iingcango koovimba sisakhono sabo sokonga indawo ngokunganyanzelekanga ukuba bajike bavule.
Iingcango ezisongekileyo okanye iingcango zepanoramic zenza udibaniso olukhulu kumagumbi okulala okanye kwigumbi lokuhlala elifuna ukuvula umboniso wokwenyani / ngaphakathi.
imibala yepeyinti yokuhlambela engenafestile
Xa kuvaliwe ucango olusongekileyo lujongeka ngakumbi njengeefestile ezibanika inkangeleko enomtsalane eyenza ukubonwa okungaphazanyiswanga kunezinye iindidi ezininzi zeengcango ezishukumayo.
Unokukhetha ukuba zingaphi iipaneli ongazithanda kwiminyango yakho yokusonga, ekunceda ukuba ulawule ngcono ukungena komoya ekhayeni lakho.
Ingcango yekodiyoni yangaphakathi
Ngenxa yoyilo lwabo olwahlukileyo ucango lwekhodiyani aludingi igumbi elininzi lokusebenza nezinye iintlobo ezininzi. Iingcango zekholiyoni ezisongelayo lolona khetho lufanelekileyo kwiindawo ezincinci ezinje ngeepaseji, ii-closets okanye izindlu zangasese apho indawo incinci.
Ungalitshintsha njani igama lakho kwi-virginia emva komtshato
indlela ekhawulezayo yokubopha iqhina
utshintsha njani ifani emva komtshato
nini ukwenza ifoto yokuzibandakanya
uyilo lwengqondo oluvulekileyo